Bit By Bit - Okwu Mmalite - 1.4.1 Readymades na Custommades
Social nchọpụta na dijitalụ afọ ahụ ga-agụnye Readymades, Custommades, ma dị ike adọ ụdị ụfọdụ.
Otu n'ime ndị kasị ama urinals mgbe e zụrụ na 1917, nakwa na urinal bụ, ndị omume, yiri nza nke na-elekọta mmadụ nchọpụta na dijitalụ afọ. The urinal na ajụjụ e zụrụ site French artist Marcel Duchamp. Mgbe ịzụta ya, Duchamp scribbled "R. Mutt 1917 "on o wee aha ya bụ ya kere eke Iyi (ọgụgụ 1.2). Ọ bụ ezie na ya mbụ n'ikuku maka bụ lukewarm, Iyi bịara atụle otu n'ime ihe ndị kasị mkpa iberibe nke nkà ọgbara ọhụrụ n'ihi na ọ na fundamentally gbanwere otú ndị mmadụ na-eche banyere nkà (Higgins 2004) . Iyi bụ ihe atụ nke a Readymade, ebe onye na-ese na-ahụ ihe na- ugbua dị n'ụwa mgbe ahụ repurposes ya dị ka art.
Ọgụgụ 1.2: Iyi site Marcel Duchamp. Iyi bụ ihe atụ nke a Readymade, ebe onye na-ese na-ahụ ihe na-ugbua dị n'ụwa mgbe ahụ creatively repurposes ya maka art. N'ihi ya, anya, a otutu elekọta mmadụ nchọpụta na dijitalụ afọ ka aka repurposing data na-kere maka nzube ụfọdụ ndị ọzọ karịa nnyocha. Photo site Alfred Stiglitz, 1917. Isi Iyi: Wikimedia Commons .
Ukwuu nke na-elekọta mmadụ nchọpụta na dijitalụ afọ ka, nnọọ, nwere a yiri ihe owuwu, ọ bụ ezie na ọ bụghị ezi na otu N'ihi. -Eme nchọpụta chọpụtara na dijitalụ ndia kere ọchịchị na ulo oru mere ihe masịrị ha-dị ka ekwentị na ndekọ, digitized akụkụ Akwụkwọ Nsọ, na-elekọta mmadụ media data-ike ga-repurposed na-elekọta mmadụ research (Lazer 2015) . Ndị ọzọ okwu, a otutu elekọta mmadụ nnyocha na dijitalụ afọ kemgbe a search n'ihi na Data Readymades.
Otú ọ dị, dị nnọọ ka ọtụtụ artists na-adịghị eje ije gburugburu na-achọ Readymades, kasị na-elekọta mmadụ na-eme nnyocha na n'oge gara aga ha ejeghịkwa ije gburugburu achọ data na ike ga-repurposed. Kama nke ahụ, kama ịbụ data-chụpụrụ, ihe ịga nke ọma na-elekọta mmadụ nnyocha na n'oge gara aga kemgbe ajụjụ na-akwali. Ya bụ, a na-eme nchọpụta nwere ajụjụ na mgbe ahụ hụrụ ma ọ bụ kere data dị mkpa iji zaa ajụjụ ahụ. Onye na-ese na-egosi nke a ọzọ style nke ọrụ bụ Michelangelo. Ọ chọrọ ime ka a akpụrụ akpụ nke David otú ọ nọrọ afọ 3 arụ na a ngọngọ nke marble ike ya masterpiece (ọgụgụ 1.3). David bụghị a Readymade; ọ bụ a Custommade.
Chepụta 1.3: David site Michaelangelo. David bụ ihe atụ nke art na e ụma kere; ọ bụ a Custommade. Nke a style nnọọ iche n'obi Readymades dị ka Iyi (ọgụgụ 1.2). Social nchọpụta na dijitalụ afọ ga-agụnye ma Readymades na Custommades. Photo site Jörg Bittner Unna, 2008. Isi Iyi: Wikimedia Commons .
Social nchọpụta na dijitalụ afọ ga-agụnye ma Duchamps na Michelangelos, ma Readymades na Custommades. Akwụkwọ a ga-enyocha okwu ndị a abụọ-eru nso, na, ọzọ ihe, ọ ga-egosi otú ha nwere ike ikpokọta n'ime a dị ike ngwakọ. Dị ka ihe atụ, Joshua Blumenstock na ibe ndị ahụ so Duchamp na akụkụ Michelangelo; ha repurposed na ekwentị mkpanaaka oku na-aga data (a Readymade) na ha kere ha nnyocha e mere data (a Custommade). Nke a agakọ nke Readymades na Custommades bụ ihe nlereanya nke ị ga-ahụ ofụri akwụkwọ a.